News 18 Nepal || होबर्ट हुरिकेन्सबाट सन्दीपले बिग ब्यास लिग खेल्ने, कति पाउँछन् रकम ?
होबर्ट हुरिकेन्सबाट सन्दीपले बिग ब्यास लिग खेल्ने, कति पाउँछन् रकम ?
काठमाडौं । नेपाली स्पीनर सन्दीप लामिछानेले होबर्ट हुरिकेन्सबाट बिग ब्यास लिग खेल्ने भएका छन् । यो सिजनका लागि सन्दीपले बिग ब्यासमा हुरिकेन्ससँग आबद्ध हुने हुरिकेन्सले जनाएको छ । यसअघि बीबीएलमा दुई सिजनमा २० खेल खेलेका सन्दीपले कुल २६ विकेट लिएका छन् ।
यसअघि इण्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली क्यापिटल्सबाट आईपीएल खेल्न यूएई पुगेका सन्दीपले कुनै खेलमा अवसर भने पाएनन् । सन्दीप बीबीएलका लागि हुरिकेन्समा जनवरीबाट जोइन हुने बताएका छन् ।
‘मैले अस्ट्रेलियामा सँधै समर्थनमा माया पाएको छु । र, बिग ब्यासको उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धा सँधै उत्साही हुन्छ । ब्लन्डस्टोन एरेनामा खेल्नको लागि पर्खाइमा छु ।’ सन्दीपले भनेका छन् । त्यस्तै हुरिकेन्सका प्रशिक्षक आडम ग्रिफ्तले सन्दीपको उपस्थितिले टिमको बलिङमा राम्रो हुने बताएका छन् ।
‘हामीले देखेका छौं कसरी सन्दीपले उनको स्पीनले कसरी ‘गेम चेन्ज’ गर्छन् । र, उनले पारीको कुनै पनि अवस्थामा बलिङ गर्न सक्छन् । उनी आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको ‘विकेट टेकर’ हुन जसले हाम्रो बलिङ ग्रुपमा अर्को आयाम थप्ने छन् ।’ सम्झौता रकम बारे भने क्लबले खुलाएको छैन ।
LAMICHHANE COMPLETES THE SQUAD.🔥
The Nepalese leg-spinner will be making his debut in purple this summer.
SEE HERE: https://t.co/4QjCy1n1vA#TasmaniasTeam #BBL10 pic.twitter.com/mfEmURMrVy
— Hobart Hurricanes BBL (@HurricanesBBL) November 18, 2020
पारस बन्लान् त आईसीसी एसोसिएट प्लेयर अफ दी डिकेड ?
बन्द प्रशिक्षणका लागि २२ खेलाडी छनौट, क-कसले पाए मौका ?
अब कम उमेर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न नपाउने, यस्तो छ नयाँ नियम
नेपालको एकदिवसीय मान्यता थप एक वर्ष
कराचीले जित्यो पीएसएलको उपाधि, कुन खेलाडीले कुन अवार्ड जिते ?
आईपीएल खेल्न नपाएका सन्दिपलाई दिल्लीले दियो यस्तो सन्देश
बङ्गलादेशका क्रिकेटर शाकिब अल हसनलाई ज्यान मार्ने धम्की